मेसी अर्जेन्टिनाको टिममा अटाएनन्, उनको स्थान कसले पाए ? – Everest Dainik – News from Nepal
मेसी अर्जेन्टिनाको टिममा अटाएनन्, उनको स्थान कसले पाए ?
काठमाडौं, भदौ ७ । आगामी असोजमा ग्वाटेमाला र कोलम्बिया विरुद्ध हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि लियोनल मेसी अर्जेन्टिनाको टिममा अटाउन सकेका छैनन् । साथै, अर्जेन्टिनाका प्रशिक्षक लियोनल स्कलोनी मेसीले राष्ट्रिय टोलीका लागि अब खेल्ने वा नखेल्नेबारे जानकारी नरहेको बताएका छन्।
बार्सिलोनाबाट व्यवसायिक फुटबल खेल्दै आएका मेसीले सन् २०१६ मा कोपा अमेरिकाको फाइनलमा चिलीविरुद्धको हारपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्याससमेत लिएका थिए। तर, चौतर्फी दबाबपछि उनी आफ्नो निर्णय उल्ट्याउँदै अर्जेन्टिनाको जर्सीमा फर्किएका थिए।
अर्जेन्टिनाको नया टिममा मेसीसँगै अग्यूरो, ओटामेन्डि, हिगुआइनजस्ता अरू खेलाडी समेत अटाएका छैनन्। उनीहरूको स्थानमा इकार्डी, लौटारो मार्टिनेज, जिओभानी सिमिओनीजस्ता युवा खेलाडीलाई मौका दिइएको छ।
हालै रूसमा सम्पन्न विश्वकपमा टोलीको खराब प्रदर्शनपछि मुख्य प्रशिक्षक जोर्गे साम्पाओलीलाईसमेत निस्कासन अर्जेन्टिनाले मेसीका विषयमा केही भनेको थिएन। प्रशिक्षक स्कलोनीले टोली छनोट गर्नुअघि आफूले मेसीसँग कुरा गरेको र उनी अर्जेन्टिनाबाट खेल्ने वा नखेल्नेमा निश्चित नरहेको बताएका छन्। उनले मेसी अर्जेन्टिनी टोलीमा नहरनू आफ्नो लागि राम्रो खबर नभएको बताए । -एजेन्सी
ट्याग्स: Arjentina Football Team, Footballar Messi, Leonal Messi